ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ ဂျပန်လေတပ်က ပုလဲဆိပ်ကမ်း ကို ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်ပေ မဲ့ အမေရိကန် တို့ စစ်မရှုံး ခဲ့တဲ့ တခုတည်းသော အကြောင်းရင်း – Na Pann San
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ ဂျပန်လေတပ်က ပုလဲဆိပ်ကမ်း ကို ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်ပေ မဲ့ အမေရိကန် တို့ စစ်မရှုံး ခဲ့တဲ့ တခုတည်းသော အကြောင်းရင်း
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ဂျပန်လေတပ် က ပုလဲဆိပ်ကမ်း ကို ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်လိုက်ချိန်မှာပေါ့ ။အမေရိကန် ရေတပ် အကြီးအကျယ် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ တယ် ။ စစ်သင်္ဘော ၇ စင်း မြုပ်သွားတယ်။၆ စင်းက သုံးလို့မရတော့ဘူး ။ရေတပ်မှာ ရှိတဲ့ တိုက်လေယာဉ် ၄၅၀ ပျက်စီးသွား ခဲ့တယ်။သေဆုံးသူ ၃၈၀၀။ အမေရိကန်တပ်သားတွေ စိတ်ဓာတ်အကျကြီး ကျသွားကြတယ်။ ပစိဖိတ်စစ်မျက်နှာ ရဲ့ ရေတပ်သားတွေဟာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့လောက်အောင် ကို စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားခဲ့ကြတယ်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ ဂျပန်လေတပ်က ပုလဲဆိပ်ကမ်း ကို ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်ပေ မဲ့
သူတို့လောက်အခြေအနေ ဆိုးတာ မရှိလောက်အောင် ကို စိတ်မှာထင်ကုန်ကြတယ် ။ဒါကြောင့်အမေရိကန်တပ်သားတွေ ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှု့ကို ပြန်အဖက်ဆယ်နိုင်ဖို့ အမေရိကန်သမ္မတ ရုစဗဲ့ ဟာ ချက်စတာနီမစ် ကို ပစိဖိတ်ရေတပ် ရဲ့အုပ်ချုပ်သူ အဖြစ် ခန့်လိုက်တယ် ။ ချက်စတာနီမစ်ဟာ တပ်သားတွေ စိတ်ဓာတ် ကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့ စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေး တစ်ခု ကို လုပ်ဖို့စဉ်းစား မိတယ် ။
သူဟာ ပုလဲ ဆိပ်ကမ်း ကျရှုံးစေသော အားနည်းချက်ကို အရင် လိုက်ရှာတယ် ။ထို အားနည်းချက်တွေ မှ တဆင့် တပ်သားတွေ ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်နှိုးဆွပေးဖို့ စီစဉ်လိုက်တယ် ။ပထမဆုံးစစ်သားတွေ နဲ့တွေ့ဆုံပွဲ လုပ်ချိန်မှာ သူကလက်ရှိ အခြေအနေ ကိုအဆိုးဆုံးလို့ထင်နေကြပါ သလား..?တကယ်တော့မဆိုးသေးပါဘူး။ ဂျပန်လေတပ်တွေ သာ အမှား ၃ ခု ကို မကျူးလွန်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်ငါတို့ ဒီနေရာ မှာ ဒီလိုရပ်ပြီးတောင် စကားပြောနိုင်ကြမယ် မထင်ပါဘူးဗျာ။”
“အဲ့ဒီအမှား ၃ ခု က ဘာလည်း သိချင်ကြလား…?”တပ်သားတွေ စိတ်ထဲ ထို အမှား ၃ ခု ကို သိချင်စိတ်ပြင်းပြစွာ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ..” ပထမဆုံးအမှားက ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို ဗုံးလာကြဲချိန်ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်နေတာ ပါပဲ။ တနင်္ဂနွေနေ့ ဆိုတာ အားလပ်ချိန်ပါ ။ အပန်းဖြေချိန်ပါ။ သင်္ဘောပေါ် မှာ စစ်သား အကုန်မရှိကြပါဘူး။ သူတို့တွေအခြား နေရာတွေ မှာ အနားယူနေကြ တယ်။
တကယ် လို့ ဂျူတီချိန် တွေမှာသာ ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်လာ ခဲ့ရင် သေဆုံး စာရင်းက ၃၈၀၀၀ ဖြစ်သွားပါ လိမ့်မယ် ။””ဟုတ်လား ?”ဟုတ်နေ ပါတယ် ။ ဒီအချက် ကို သူတို့မတွေးခဲ့ကြဘူး ။ဒါကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ကြတ ယ်။ ခုတော့အသေအပျောက်စာရင်း က အများကြီး နည်းသွားခဲ့ လို့ ကံကြမ္မာဟာ သူတို့ဘက်မှာ ရှိနေတာကိုမြင်သွားကြတယ်။ တပ်သားတွေစိတ်တက်ကြွလာတာကိုမြင်လိုက်ရ တဲ့ နီမစ်ကနောက်တစ်ချက် ကိုထပ်ပြော တယ်။
” ဒုတိယ အမှားက တော့ အရမ်း ဆိုးတယ် ။ ဒီဂျပန်တွေ တကယ်ဆို သင်္ဘောတွေကိုပဲ ဗုံးကြဲ ခဲ့တာ သူတို့ကံဆိုးတာပဲဗျာ ။ သင်္ဘောကျင်းတွေ ကို မဖျက်ဆီးခဲ့မိကြဘူးလေ။ သင်္ဘောကျင်းတွေသာ ပျက်ဆီးကုန်ရင် ကျန်တဲ့သင်္ဘောတွေကမ်း ကပ်နိုင်မှာမဟုက်သလို ။ ပျက်ဆီးသွားတဲ့ သင်္ဘောတွေကိုလည်း ပြန်ပြုပြင်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့သဘောတွေကို မိုင်ထောင်ချီသွားပြီးပြုပြင်နေရလိမ့်မယ် ။ဒါဆိုရင်တော့ ငါတို့ သွားပြီ နာလန်တောင်ထူနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။””ဟုတ်တယ်မလား”မှန်တယ်။ တပ်သားတွေ လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးကြတယ် ။
စိတ်ဓာတ်တွေလည်း တက်ကြွလာကြတယ် ။ဒီဆုံးရှုံးမှု့ဟာ ဘာမှ မဟုတ်တာ ကို မြင်လာကြတယ်။ သူတို့ နောက်အမှား တစ်ခုကို ပိုသိချင်လာကြတယ် ။”တတိယ အမှားကတော့” အားလုံး စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။သေချာနားစွင့်နေကြတယ်။ နီမစ် က ကျယ်လောင်စွာပဲ ပြောလိုက်တယ် ။” ဂျပန်တွေ သိပ် တုံးတယ် ။ သူတို့ဟာ ငါတို့ ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ ကလဲ့စားချေဖို့ အတွက် အားအင်တွေ ကို အပြည့်ချန်ထားပေး ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါက လောင်စာဆီတွေပဲ။
လောင်စာဆီကန်တွေ ဟာ ငါတို့သင်္ဘောကျဉ်း နဲ့ ၅ မိုင်အကွာတောင်ထိ ပ်မှာ ရှိနေတယ်။ဒီ ကန်တွေ ကိုပါ ဗုံးကြဲခဲ့ကြရင် ငါတို့မှာ ရှိသမျှ တိုက်လေယဉ်တွေသင်္ဘောတွေဟာအလကားပဲကွ ။”အကုန် စိတ်ဓာတ်တွေ တစ်ဝုန်းဝုန်ကြွတက်လာကြတယ် ။”ဂျပန်တွေ ဘာလို့ ဒီအမှားတွေ ကျူးလွန်ခဲ့သလည်း သိကြလား?။ အဖြေကရှင်းတယ် ။ ဘုရားသခင်ဟာ ငါတို့ဘက်မှာ အမြဲရှိနေခဲ့တယ်။
ငါတို့ကိုကူညီခဲ့တယ် ။”လက်ခုပ်သံတွေ ဆူညံစွာထွက်ပေါ်လာတယ် ။ကြွေးကြော်သံတွေ ညံထွက်လာတယ် ။အရှုံးထဲ က နေ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ မိမိဘက်မှာရှိနိုင်သောရနိုင်သော အခွင့်အရေးကို မြင်လိုက်ရချိန် မှာ အားအင်တွေ လုံးဝ တက်ကြွသွားကြတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ အမေရိကန်ရေတပ်ဟာ ဂျပန်တွေ ထိန်ချုပ်ထားသောMarshall နဲ့ Gilbert ကျွန်းတွေကို ရုတ်တရက်ပြန်သိမ်း လိုက်တယ် ။
ဂျပန်စစ်သင်္ဘော ၈ စီးကိုမြုပ်ပစ်လိုက်တယ် ။ တောက်လျှောက်ပစိဖိတ် စစ်မျက်နှာပြင် မှာ ဂျပန်လေယာဉ်တွေ စစ်သဘောတွေကိုေ ရအောက်မြုပ်ပြ လိုက်တယ် ။နောက်ဆုံး လက်နက်မချနိုင်တဲ့ဂျပန်တွေကို ၁၉၄၅ သြဂုတ် ၆မှာ ဟီရိုးရှီးမား သြဂုတ် ၉ မှာနာဂါဆကီ မြို့၂မြို့ ကို အနုမြူဗုံးကြဲ ချပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို အနိုင်ယူလိုက်ကြ တယ်။
ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရအောင် တကယ် လို့ ပုလဲဆိပ်ကမ်း ရှုံးနိမ့်မှု့မှာကထဲ က အမေရိကန်တွေသာ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အရှုံးကို သာ လက်ခံခဲ့ကြရင်ယနေ့ ခေတ် super power နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒီလိုမျက်မှောက်ခေတ် အောင်မြင်မှု့ ရရှိစေသော အကြောင်းပြချက် က ရိုးရိုးလေးပါ ။
” အရှုံး ကို လက်မခံလိုက်ပါနဲ့ “ အရှုံး ကို လက်မခံသေးသမျှကာလပက်လုံး သင့် မှာ အောင်မြင်ဖို့ 90%ရှိနေပါသေးတယ် ။ ဘာလို့ အဆင်မပြေဖြစ်တိုင်း စိတ်ဓာတ်ကျကြ မှာလဲ…အကောင်းလေးတွေ မြင်ကြည့်ကြ ပါ ။ ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ အခြေအနေ မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင်သာအကောင်းမြင်တတ်ရင် သင့်အတွက် သင့်ဘက်မှာ ကံတရား ရှိတာမြင်လာပါလိမ့်မယ် ။ ဒါဆို ဘာလို့ နောက်တခါ ပြန်မကြိုးစားနိုင်ရမှာလဲသင် လဲကျမှာ လုံးဝမစိတ်မပူမိ ပါဘူး။
သင် ပြန်မထနိုင် မှာ ကိုသာ စိတ်ပူမိပါတယ် ။ပြန်ထလာနိုင်ဖို့လည်း အားအင်တွေပေးနိုင် ပါတယ် ။ဒီကနေ့ ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲဆိုတာအနာဂါတ်မှာ သင့်ကိုပိုမိုအောင်မြင်စေမယ့် တွန်းကန်အား ဆိုတာမြင်ပြီလား… ? မြင်တတ်ပြီလား ..? အောင်မြင်မှု့ဆီ အတူတူသွားကြရအောင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောရဲတယ် ။
တွေ့ရှိချက်အသစ်အရ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မျက်လုံးကတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ကြောင်း ဆေးသိပ္ပံသုတေသီများ အခိုင်အမာပြောပြီ
တစ်နေ့ ကို အရက်တစ် ခွက်ပုံမှန်သောက် ပါက အသက် (၉၀) အထိနေနိုင် ပါတယ်တဲ့